गाेरखातर्फका बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावितलाई १ अर्ब ८ कराेड मुआब्जा वितरण
गोरखा । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले गोरखातर्फका डुबान क्षेत्रका प्रभावितलाई थप रु. एक अर्ब आठ करोड मुआब्जा वितरण गरेको छ ।
सांग्रिला बैंक र नेपाल मेडिसिटी अस्पतालबीच स्वास्थ्य–उपचार सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौँ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र नेपाल मेडिसिटी अस्पतालबीच उपचार शुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।
बिकेन बन्दा, जोतेर नष्ट गर्ने क्रम सुरु !
चितवन । किसानले लगाएको तरकारी नबिकेपछि जोतेर नष्ट गर्ने क्रम जिल्लामा शुरु भएको छ । तरकारी टिप्ने र ढुवानी भाडासमेत नउठ्ने भएपछि अर्को खेती गर्नका लागि किसानले तरकारी नष्ट गर्न थालेका हुन् ।
झोले एनजीओको नाममा एक करोड वितरण
काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीले मापदण्ड मिचेर ३२ झोले एनजीओलाई एक करोड वितरण गरेका छन् । रकम बाँड्न पदाधिकारीले अनुदान, कार्यविधि नै संशोधन गरेका छन् ।
व्यापार आदानप्रदान गर्न पोखरेली पर्यटन व्यवसायी सिलगुडी पुगे
पोखरा । पोखराको प्रचार प्रसार गर्न यहाँका पर्यटन व्यवसायी भारतको सिलगुडी पुगेका छन् । नेपाल–भारतका व्यवसायीबीच व्यापार आदानप्रदान गर्न सहज हुने र भारतका उत्तरपूर्वी राज्यबाट पोखरा भ्रमणमा आउने क्रम पनि वर्षेनी बढ्दै गएको सन्दर्भमा पोखराको प्रचार गर्न व्यवसायी त्यहाँ पुगेका हुन् ।
मासिक २० कराेड राजश्व तिर्ने सर्वाेत्तम सिमेन्टकाे याेजना
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योगले मासिक रूपमा करीब रु. २० करोड राजश्व तिर्ने योजना बनाएको छ ।
‘क्यान इन्फोटेक’ चार लाख व्यक्तिले अवलोकन गरे
काठमाडौँ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी मेला ‘क्यान इन्फोटेक’ को झण्डै चार लाख व्यक्तिले अवलोकन गरेका छन् । माघ १५ गतेदेखि शुरु भएको सो मेलामा उत्साहजनक उपस्थिति रहेको कम्प्युटर एसोशिएसन नेपाल (क्यान)का महासचिव रञ्जितकुमार पोदारले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ । नेपाल बैंकले चालू आर्थिक वर्षको छ महीनामा रु एक अर्ब ६६ करोड १४ लाख ९८ हजार नाफा कमाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले रु एक अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ५९ हजार नाफा कमाएको थियो । गत आवको छ महीनाको तुलनामा चालू आवको छ महीनामा बैंकले १.४० प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो ।
साताको पहिलो दिनमै धितोपत्र बजारमा आज शेयरको मूल्य घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ८.५७ विन्दुले घटेर एक हजार १५३.०६ विन्दुमा झरेको छ ।
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीटेलको मूल्यवृद्धि गरेको छ । शनिबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँको दरले वृद्धि गरिएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए । नयाँ मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ११०, डिजल र मट्टीतेल प्रतिलिटर ९७ कायम भएको छ ।